‘जय शम्भु’मा अनुप हिरो, प्रशान्त भिलेन : बर्षा कस्को ? « Ramailo छ
‘जय शम्भु’मा अनुप हिरो, प्रशान्त भिलेन : बर्षा कस्को ?
प्रकाशित मिति : Feb 25, 2018
जुना फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण हुन लागिएको फिल्म ‘जय शम्भु’ को घोषणा गरिएको छ । आईतवार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै फिल्मको निर्माण टिमले फिल्मको औपचारिक घोषणा गरिएको हो ।
फिल्ममा प्रशान्त ताम्राकार, अनुुप विक्रम शाही र बर्षा शिवाकोटीको मूख्य भूमिकामा प्रस्तुत हुँदैछन् । यो फिल्ममा अनुप हिरोको रुपमा प्रस्तुत हुँदैछन् भने प्रशान्त भिलेन र बर्षा लिड हिरोइनको रुपमा प्रस्तुत हुनेछिन् । फिल्म जय शम्भुबाट रोशन महर्जनले नव नायकको रुपमा डेब्यु गर्दैछन् ।
दिनेश शाही, अरविन्द्र शाक्य, चक्र पाख्रिन, राजकुमार नगरकोटी लगायतको लगानी रहने फिल्मलाई रुपेश तामाङले निर्देशन गर्नेछन् । ४५ दिन सम्म छायाँकन हुने फिल्म काठमाडौं र अन्नपूर्ण वेस क्याम्पमा खिचिने निर्माण पक्षले बताईएको छ । हरि घले लामाले खिच्ने फिल्ममा श्री श्रेष्ठको एक्शन, रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफि रहनेछ ।
आगामी बर्षको श्रावण १ गते रिलिज लक्ष्य गरिएको फिल्ममा संगीत भने प्रदिप कँडेल र अर्जुन पोखरेलले दिएका छन् । फिल्ममा करुणा पाण्डे, अनुपम श्रेष्ठ, बसन्त भट्ट र कालु राणा लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ ।